Ungayi kubuyiselwa njani ngeminyaka? (Iminyaka engama-20-30)
Ininzi kaninzi, iipameters zethu zitshintshile ekutsheni, ngokuzalwa komntwana kunye nokuphuma komyeni. Akuyena wonke umntu owanike umfanekiso omhle kwizinto zemvelo, ezinye ziye zadlula izidalwa zezofuzo, kunye nomnye umntu obengaphezu kwamangentimitha kwinquno - umxholo wendlela yokuphila. Kodwa nawuphi na ubudala ukusuka kumakhilogremu angaphezulu angakunqumla kalula. Into ephambili kukuba sisondele kwisisombululo sale ngxaki ngokufanelekileyo nangokucacileyo.
Kutheni sifuna ubutsha? Yaye ungakukhusela njani oku?
Nangona ezinye izazinzulu zithetha ukuba ukubunjwa kwesibalo akudluli kwizinto eziphathekayo, oko akukabonakali. Kodwa ekuqaleni akukho namnye wethu ongaqulunqwa ngendalo ukuba atyebe. Kusuka kubazali, sinokuyeka ukuphelisa i-penchant yokugqiba, imibono ebomini nemikhwa yansuku zonke.
Makhe sifumane isizathu, iphi iipounds ezongezelelweyo zithatha iminyaka engama-20? Njengomthetho, abantwana ukususela ekuzaleni ukuya kumzuzwana wokuphumelela bahlala nabazali babo. Abazali basondla, basenza kuthile izinto ezithandayo, indlela yokuphila. Yaye zonke ezi zinto zichaphazela ubunzima kakhulu. Ukuba intsapho iya kuthatha ukutya okunempilo, hamba kwizinto eziphilayo kwaye uholele impilo enempilo, akunakwenzeka ukuba umntwana uya kukhula. Kwaye ke, ukuba nonke nisakhula kunye nokutya okunamafutha, awuzange uhambise kakhulu, ngoko kwixesha elizayo oku kuya kuphazamisa umzobo wakho.
Xa uneminyaka engamashumi amabini, i-metabolism isoloko ihleli. Ngoko ke, nangona unesisindo esithe xaxa, gxotha lula kakhulu. Qala ngokutya kokutya kwakho. Ukuphelisa wonke umgubo, ocoliweyo, onobutyebi, onosawoti. Yidla ukutya okuncinci kunye nokutya okunempilo: i-porridge, imifuno, izithelo kunye ne-tadaleye. Yiya kwimidlalo okanye uhamba. Ukuba unamathela kuyo yonke into, emva kweenyanga ezimbalwa uza kukwazi ukuguqula ngaphaya kwesaziso.
Ulutsha olutsha lwendawo kwindawo engozi
Ngokuqhelekileyo abantwana abaselula abakhetha ukuphila ngendlela enempilo. Ngokomzekelo, bachitha imali ye-pocket ngokutya okukhawuleza, ii-chips kunye ne-hamburgers. Esikhundleni samanzi, bakhetha ubhiya okanye i-soda. Kwiziko, badla ii-chocolates ezahlukeneyo kunye nekiki. Ukuba ubala inani lemali ngeveki ukuya kule nto, ngoko ufumana imali eninzi, ongayithengela ukutya okuninzi luncedo: iimveliso zobisi, imifuno, okusanhlamvu kunye nokunye.
Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba abazali balungiselela ukutya okuphezulu-khalori, okuvela kuyo abantwana. Kunzima ukutshintsha iinqununu zabazali, kodwa ungathatha isinyathelo ezandleni zakho uze uziphekele izitya zakho.
Omnye umgibe yi-Intanethi. Ngokubonakala kwakhe, kungekhona nje kuphela umntwana, kodwa nabantu abadala baqala ukuhamba ngaphantsi kwaye bachitha ixesha elingakumbi kwikhompyutha. Le yindlela engcono kakhulu yokuchaphazela umzobo. Ukongezelela, ngapha nangeminye imisebenzi emininzi enomdla: hamba u-roll rollers, ugibele echibini, uye epikinikini nabahlobo.
Ukuba uhlala uhlala ekhaya phambi kweTV kwaye awunomdla kuyo nayiphi na into, ngokuqinisekileyo uneengxaki ngokulinganisela. Ndicinga ukuba izizathu zicacile.
30+ - phakathi komsebenzi wentsapho
Ngokuqhelekileyo, abasetyhini beli minyaka bafumana ubunzima obunzima emva kokuzalwa komntwana. Ngexesha lokukhulelwa, umfazi uneza ubunzima obuphakathi kwe-10 ukuya kwi-12 kilogram. Ngokuqhelekileyo oku kwenzekayo ngokutya ukutya kunye nebhotela, i-macaroni, izithelo ezomileyo, izantyambo kunye nezinye zokutya eziphezulu, ezixhamla kumama ozayo, kodwa ngexesha elifanayo zibi kakhulu kulo mfanekiso. I-salty i-gourmets yengozi ayiyi kuzisa umfanekiso, ongenakutshoyo ngomnandi. Kodwa yintoni omele ukwenze? Faka endaweni enothileyo ngemveliso enomdla ngakumbi, umzekelo, izithelo ezomileyo. Uya kuchitha ixesha elide lokuhlafuna phezu kwazo, oko kuthetha ukuba uya kuyaneliseka kungekudala. Ukongezelela, kuyimfuneko ukuqonda ukuba ukususela ngokutya ngokugqithiseleyo iiskese umntwana wakho ozayo unokufumana iingxaki nge-metabolism.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba abantwana babo oomama abafumana iikhilogram ngexesha lokukhulelwa banokuthi banokugqithisa kwixesha elizayo. NgokweSizwe seZiko lezeMpilo kunye neMigangatho yezeMpilo, ubuninzi bokuba ungaphila ngexesha lokukhulelwa li-18 kilogram.
Kwinqaku! Ukuphepha ukukhathala okukhulu ngexesha lokukhulelwa, ukunciphisa inani leekhalori ekudleni kwakho. Ngomhla kufuneka ungadli ngaphezu kwama-khalori angama-2000. Oku kusebenza kwixesha le-lactation. Inani leekhalori kufuneka lihlale lifanayo. Musa ukuncika kumantongomane, ubisi olunamanzi kunye netiyi elimnandi. Xa umntwana ekhula, ungadli ukutya kuye kunye nosawoti, oku kutya kuqukethe iikhalori ezininzi. Ungalibali ukulala okupheleleyo. Ukungaphumeleli kwayo kukuchaphazela kakubi isiqalo sakho. Zama ukwabela ixesha-yenza imisebenzi, uthathe isitya esahlukileyo, uhamba ngendlela. Oku kuya kunceda ukuhlala kwindawo efanelekileyo.
Abafazi bafumana ubunzima obungaphezu kwexesha kuphela xa bekhulelwe, kodwa nakwixesha lokutya. Ukongeza, ubomi bentsapho buchaphazela. Xa ibhinqa litshatile, liye lazala umntwana, ngoko ibuyela. Kutheni ufuna ukuqhubeka nokuzama ukugcina umzimba unesimo esihle?
Xa kuthengwa kwintsapho, umntu uyancipha, kwaye ubomi bakhe buyingcipheko buba ngakumbi kwaye buqikelele. Utshintsho olunjalo aluchaphazeli kuphela abafazi kuphela, kodwa namadoda. Kutheni kunjalo? Umzi kubangele ukuthintela ubunzima. Yiphi ixesha losapho? Ukuhlala phantsi phambi kweTV, ukutya okumnandi. Indlela yokuphila iyasebenza. Sitshintsha imikhwa yethu. Esikhundleni sokuhamba kwendalo, ezininzi izibini zikhetha ukubukela ifilimu eyithandayo. Kodwa emva kwakho konke, wena kunye nam singenza ezinye izinto ezininzi ndawonye: ukukhwela ibhayisikili, ukuya kwindawo yokuzivocavoca, nje ukuhamba. Ukunciphisa ubunzima ngasese, kodwa kunye-kulula ukwenza.
Ngokuqhelekileyo, ngowona wesifazane onguyilungu lomqondo wokulahleka kwesisindo. Amadoda angaphezu kweekhilogram kuneziganeko ezingafaniyo. Bazithandayo ngokweziphi na uhlobo. Ngoko ke, abafazi kufuneka benze umgudu omkhulu ukwenzela ukuba indoda yakhe ibambelele kwinkqubo yokulahlekelwa ubunzima. Njani ukwenza oku? Kulula kakhulu!
Ungaze ubeke umthandi wakho phambi kweqiniso-kufuneka ulahlekelwe isisindo. Kulungile ngokumthobela kuye kule nkqubo: ngokuthetha, iingcebiso, iingxoxo. Qala ukutshintsha ukutya okuqhelekileyo, kunye nemikhwa. Fumana umdlalo oqhelekileyo oza kubangela ukubukela kweefilimu. Kodwa ukutshintshwa kufuneka kufumane ukuthanda kwabo bobabini, ngoko kufuneka wenze ukhetho olufanelekileyo.
Njengoko kukhankanywe ngasentla, utshintshe ngokuthe ngcipheko ukutya. Okokuqala, ungabandakanyi omnye okanye ezimbini izinto ezinobungozi kuwo kwaye uzibuyisele ezifanelekileyo. Yenza ude uphelise ngokupheleleyo ukutya okulimazayo oqhele ukutya. Kodwa khumbula, ukutya okutsha kufuneka kube mnandi kwaye kufane nesiqingatha sakho sesibini. Emva koko, ngokutya okungenakusihlwa, kulula kakhulu ukuyeka ukusetyenziswa. Ukuziqhelana kancane kunye nomntwana wakho ekutya okunesondlo. Oku kuya kunceda.
Abasetyhini, soloko beyidemokhrasi. Ukuba umyeni wakho akafuni ukunciphisa umzimba kwaye adle ukutya okunempilo, ungagxininisi, ngaphandle koko unokulimaza kuphela. Indoda kufuneka ifune into ethile. Ngoko ke, ishishini lethu lincinci kuphela, kwaye kukho umcimbi wokukhetha. Ukongezelela, ukuba unako ukufezekisa iziphumo ezifunayo ekulahlekelweni kwesisindo, kunokushukumisa isiqingatha sakho sesibini ukulandela umzekelo wakho. Ngoko mhlawumbi, fumana umgomo wakho.
Iindlela zesintu zesifo sikashukela
Izilwanyana zamanqanaba zokukhula kwesikhonkwane ngokukhawuleza
I-Meteozavisimost - kuxhomekeka kwimozulu
IHoroscope yezeMali kwaye isebenze ngoFebruwari 2014
Uhamba ngeqanda kunye no-anyanisi eluhlaza
Biography kaLouis de Funes